KOLONTSAINA : Hifindra ao amin’ny consulat de France ny Alliance française
Efa manomboka ny famindrana ny entan’ny Alliance française ao amin’ny trano vaovao tamin’ny herinandro lasa teo. 14 décembre 2017
Amin’ity volana desambra ity no hiala tanteraka ao amin’ny trano efa nahafantarana azy hatramin’izay, eo amin’ny ‘bord’ ny Alliance française ka hifindra ao amin’ny ‘consulat de France’ ampitan’ny ‘commissariat central’. Folo taona mahery no nitoeran’ny Alliance française teo amin’ny ‘bord’ ary anisan’ireo vakoka teto Mahajanga izy io, ivon-toeran’ny fifanakalozana sy ny kolotsaina ary ny fanabeazana. Mpanofa ihany anefa izy ireo ary ankehitriny dia alain’ny fondation Aga Khan ny trano. Marihina fa ity farany no tompony. Volana vitsivitsy no efa nanomboka ny fanorenana ny trano vaovao hanampy ny fandraisana ny alliance française vaovao ao amin’ny ‘Consulat de France’.
Manomboka amin’ny faran’ny volana desambra izany dia toerana iray no misy ny consulat sy ny Alliance française. Ho hita ao daholo ireo fotodrafitrasa sy tolotra nomen’ny alliance française hatramin’izay. Ankoatry ny trano famakiam-boky sy ny médiathèque dia misy ny efitrano fampianarana, ny fanaovana fampisehoana isan-karazany. Mbola ahitana ny trano fisakafoana sy cyber izay nisy tao amin’ny Alliance française ato amin’ity trano vaovao ity.
Tsiahivina moa fa ankoatry ny fampianarana teny frantsay dia misy ireo fialamboly sy fampianarana hafa toy ny djémbé, gitara, dihy,.. ao amin’ity toerana ity. Misy ihany koa ny sehatra natokana ho an’ny kanto rehetra toy ny hira, slam, dihy sy ny maro hafa. Mandray ireo mpanao taozavatra sy mpanakanto toy ny mpanao hosodoko, arts plastiques isankarazany, izay matetika manao fampirantiana sy varotra ao. Tsy ny kolotsaina frantsay ihany no asandratra ao amin’ny alliance française fa ny kolotsaina Malagasy, karana, komorianina sy kameroney ary ireo rehetra maniry ny hampiseho ny talentany dia voaray antanandro avokoa. Marihina moa fa ho fanalana fahasahiranana ny mpianatra dia efa nasiana trano fandraisana mpianatra sy fampianarana teny frantsay ihany koa eny amin’ny fokontany lavitra toa an’i Sotema sy Amborovy